Muddaharaad ballaaran oo looga soo horjeedo maamulka Mustafe Cagjar oo ka dhacay Degmada Yucub ee gobolka Doollo – Radio Daljir
Muddaharaad ballaaran oo looga soo horjeedo maamulka Mustafe Cagjar oo ka dhacay Degmada Yucub ee gobolka Doollo
Nofeembar 9, 2019 1:43 b 0
Isusoobax ballaaran oo looga soo horjeedo maamulka uu hoggaankiisa hayo Madaxweyne Mustafe Cagjar ee Dowlad Deegaanka Soomaalida (DDS) ayaa maanta ka dhacay degmada Yucub ee gobolka Doollo.
Bannaanbaxan ballaadhan ee maamulka looga soo horjeedo ayaa looga cabanayaa caddaalad-darrada xukuumada Madaxweyne Mustafe Muxumed Cumar. Bannaanbaxa waxaa ka horreeyey ayada oo shalay Jigjiga lagu xirey masuul kamid ah nindoorka Tuli oo Madaxweyne Mustafe Cagjar weydiiyey su’aalo kulul oo ku saabsan waxqabadaka ay u baahanyihiin barakacayaasha ku sugan xerada Qoloji.
Muxiyadiin Xaaji Abiib oo kamid ah oday-dhaqameedka degmada TULI GUULEED ayaa xabsiga loo taxaabay kaddib su’aalihiisa oo ay kamid ahaayeen dhibaatada lagu hayo shacabka deegaanka Tuli Guuleed iyo barakacinta ku socota bulshada.
La xiriira warka kore
Muxyadin Xaaji Abiib oo xabsiga la dhigay kaddib markii uu kahoryimid in Oromo la dejiyo Tuli Guuleed
Dowlad Deegaanka Soomaalida 203 Wararka 19716
Saaka & Dunida iyo Xuseen Cabdi Jimcaale Madar, Daljir Bosaaso (dhegayso)
Gurmad Baladweyne oo maanta Gaalkacyo ka ambabaxay (Sawiro)